2021 Golden Boy ဆုရှငျအဖွဈ ဘယျသူတှေ ထိပျဆုံးက ရပေနျးစားနလေဲ – Sports A2Z
2021 Golden Boy ဆုရှငျအဖွဈ ဘယျသူတှေ ထိပျဆုံးက ရပေနျးစားနလေဲ
ဒေါ့မနျတိုကျစဈမှူး အာလငျး ဟာလနျးက လကျရှိ Golden Boy ဆုရှငျအဖွဈ ၂၀၂၀ ခုနှဈအတှကျ ရှေးခယျြခံထားရသူဖွဈပွီး အသကျ ၂၁ အောကျကစားသမားတှကေို ရှေးခယျြခြီးမွှငျ့နကေဖြွဈပါတယျ။ အခု ၂၀၂၁ မှာတော့ အောကျတိုဘာ ၁၅ ရကျနမှေ့ာ နောကျဆုံးဆနျခါတငျ ၂၀ ဦးကို စဈထုတျပွီး Golden Boy ဆုရှငျကို ရှေးခယျြကွငွောသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီထဲက Golden Boy ဆုရှငျအဖွဈ ထိပျဆုံးကနေ ရပေနျးစားနတေဲ့ ကစားသမား ၅ ဦးကတော့ ..
၅။ ဘူကာယို ဆာကာ
အာဆငျနယျနညျးပွမီခေးလျ အာတီတာရဲ့ လကျထဲမှာ တသှေးတမှေးနဲ့ အရောငျအဝါတောကျပလာခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျသားလေးကိုတော့ နရောစုံမှာ စှယျစုံရကစားသမားအဖွဈ အာဆငျနယျသငျးကို အခြိနျမရှေး အကြိုးပွုနလေို့ ခြီးကြူးမှုတှေ မြားစှာရှိနခေဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ မဆုတျမနဈကွိုးစားမှုကလညျး ၁၉ နှဈသားလေးကို ကမ်ဘာ့အဆငျမီ ဘောလုံးကွယျပှငျ့တဦးအဖွဈ မွငျတှလေ့ာစဖေို့လညျး ရှိနတောပါ။
၄။ မဆေနျ ဂရငျးဝုဒျ
ယူနိုကျတကျရဲ့ သဈသားစိမျးလေးကတော့ ဝိနျးရှနျနီ၊ ပေါ့ဘာ၊ နဲ့ မာစီယယျလျတို့လို သရဲနီစီနီယာကွီးတှရေဲ့ ခွလှေမျးကို နငျးနိုငျမလားဆိုတာ ခနျ့မှနျးမှုတှနေဲ့ သံသယတှေ ရောထှေးနပေမေယျ့ Golden Boy ဆုအတှကျ ထိပျတနျး ၅ ယောကျစာရငျးထဲမှာတော့ အဓိကပွိုငျဘကျအဖွဈ ထညျ့သှငျးခံလာရတာကိုလညျး တှရေ့ခြိနျမှာ သူ့စှမျးဆောငျရညျကတော့ သကျသပွေစရာတှတေော့ ရှိနဆေဲလညျး ဖွဈပါတယျ။
၃။ ရိုငျယနျ ဂရဗေငျဘာ့ချ
အိုငျးယတျဈအသငျးရဲ့ အကယျဒမီထှကျအဖွဈ အလတျဆတျဆုံး အနာဂတျလူငယျသှေးသဈလို့ ဂုဏျပွုခံထားရသူဖွဈပွီး ၁၉ နှဈသားအရှယျမှာပဲ ကှငျးလယျပိုငျးမှာ နိုငျနိုငျနငျနငျး ထိနျးကြောငျးကစားနပွေီဖွဈပါတယျ။ မယုံကွညျနိုငျစရာကောငျးတဲ့ ဘောလုံးအမွငျကို ပိုငျဆိုငျထားသလို သူ့ရဲ့ဘောလုံးဦး​နှောကျကွောငျ့ နယျသာလနျရဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ပူးပေါငျးခှငျ့ရထားတာပါ။
ဘာစီလိုနာရဲ့ လာမာစီယာအကယျဒမီထှကျဆိုတဲ့အတိုငျး ဂုဏျပုဒျကမသေးသလို ခွစှေမျးပိုထငျးနတောက အငျနီယကျစတာနဲ့ ဆငျတူတဲ့ ကစားဟနျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘာစီလိုနာရဲ့ အငျနီယကျစတာလကျသဈအဖွဈ သတျမှတျခံထားရပွီး ညာတောငျပံကစားသမားနရောကနေ နညျးပွရျောနယျလျ ကိုးမနျလကျထကျမှာ ပငျတိုငျကှငျးလယျလူဖွဈလာခဲ့တဲ့ ၁၈ နှဈသားလေးပါ။
၁။ ဂြုဒျ ဘယျလငျဟမျ
၁၈ နှဈတောငျ မပွညျ့သေးတဲ့ အင်ျဂလနျလူငယျကွယျပှငျ့လေးဟာ ဥရောပခနျြပီယံလိဂျဝငျကစားခဲ့တဲ့ အသကျအငယျရှယျဆုံးကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့သူပါ။ ကှငျးလယျကို ကွီးစိုးပွီး ကစားနတေဲ့ သူ့ရဲ့စှမျး​ဆောငျရညျက အသကျအရှယျနဲ့ ပိုငျးဖွတျလို့ မရအောငျကို တောကျပလှနျးနတေယျ။
ဒေါမနျ့ကှငျးလယျလူဟာ Golden Boy ဆုရှငျဖွဈလာမယျလို့ တဈပေးခံထားရပွီး သူ့ရဲ့တညျငွိမျတဲ့ခွစှေမျးက ဒီဆုနဲ့ အထိုကျတနျဆုံး ကစားသမားအဖွဈ သတျမှတျခံထားရသလို No. 8 နရောရဲ့ အနာဂတျသဈကို သူက ယူဆောငျပေးဖှယျရှိနတေယျလို့လညျး အကဲဖွတျခံထားရသူပါ။
ဒေါ့မန်တိုက်စစ်မှူး အာလင်း ဟာလန်းက လက်ရှိ Golden Boy ဆုရှင်အဖြစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ရွေးချယ်ခံထားရသူဖြစ်ပြီး အသက် ၂၁ အောက်ကစားသမားတွေကို ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နေကျဖြစ်ပါတယ်။ အခု ၂၀၂၁ မှာတော့ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံးဆန်ခါတင် ၂၀ ဦးကို စစ်ထုတ်ပြီး Golden Boy ဆုရှင်ကို ရွေးချယ်ကြေငြာသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီထဲက Golden Boy ဆုရှင်အဖြစ် ထိပ်ဆုံးကနေ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကစားသမား ၅ ဦးကတော့ ..
အာဆင်နယ်နည်းပြမီခေးလ် အာတီတာရဲ့ လက်ထဲမှာ တသွေးတမွေးနဲ့ အရောင်အဝါတောက်ပလာခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်သားလေးကိုတော့ နေရာစုံမှာ စွယ်စုံရကစားသမားအဖြစ် အာဆင်နယ်သင်းကို အချိန်မရွေး အကျိုးပြုနေလို့ ချီးကျူးမှုတွေ များစွာရှိနေခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားမှုကလည်း ၁၉ နှစ်သားလေးကို ကမ္ဘာ့အဆင်မီ ဘောလုံးကြယ်ပွင့်တဦးအဖြစ် မြင်တွေ့လာစေဖို့လည်း ရှိနေတာပါ။
၄။ မေဆန် ဂရင်းဝုဒ်
ယူနိုက်တက်ရဲ့ သစ်သားစိမ်းလေးကတော့ ဝိန်းရွန်နီ၊ ပေါ့ဘာ၊ နဲ့ မာစီယယ်လ်တို့လို သရဲနီစီနီယာကြီးတွေရဲ့ ခြေလှမ်းကို နင်းနိုင်မလားဆိုတာ ခန့်မှန်းမှုတွေနဲ့ သံသယတွေ ရောထွေးနေပေမယ့် Golden Boy ဆုအတွက် ထိပ်တန်း ၅ ယောက်စာရင်းထဲမှာတော့ အဓိကပြိုင်ဘက်အဖြစ် ထည့်သွင်းခံလာရတာကိုလည်း တွေ့ရချိန်မှာ သူ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ သက်သေပြစရာတွေတော့ ရှိနေဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ရိုင်ယန် ဂရေဗင်ဘာ့ခ်
အိုင်းယတ်စ်အသင်းရဲ့ အကယ်ဒမီထွက်အဖြစ် အလတ်ဆတ်ဆုံး အနာဂတ်လူငယ်သွေးသစ်လို့ ဂုဏ်ပြုခံထားရသူဖြစ်ပြီး ၁၉ နှစ်သားအရွယ်မှာပဲ ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ နိုင်နိုင်နင်နင်း ထိန်းကျောင်းကစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့ ဘောလုံးအမြင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို သူ့ရဲ့ဘောလုံးဦး​နှောက်ကြောင့် နယ်သာလန်ရဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ပူးပေါင်းခွင့်ရထားတာပါ။
ဘာစီလိုနာရဲ့ လာမာစီယာအကယ်ဒမီထွက်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဂုဏ်ပုဒ်ကမသေးသလို ခြေစွမ်းပိုထင်းနေတာက အင်နီယက်စတာနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ကစားဟန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာရဲ့ အင်နီယက်စတာလက်သစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး ညာတောင်ပံကစားသမားနေရာကနေ နည်းပြရော်နယ်လ် ကိုးမန်လက်ထက်မှာ ပင်တိုင်ကွင်းလယ်လူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ်သားလေးပါ။
၁။ ဂျုဒ် ဘယ်လင်ဟမ်
၁၈ နှစ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့ အင်္ဂလန်လူငယ်ကြယ်ပွင့်လေးဟာ ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ကစားခဲ့တဲ့ အသက်အငယ်ရွယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သူပါ။ ကွင်းလယ်ကို ကြီးစိုးပြီး ကစားနေတဲ့ သူ့ရဲ့စွမ်း​ဆောင်ရည်က အသက်အရွယ်နဲ့ ပိုင်းဖြတ်လို့ မရအောင်ကို တောက်ပလွန်းနေတယ်။
ဒေါမန့်ကွင်းလယ်လူဟာ Golden Boy ဆုရှင်ဖြစ်လာမယ်လို့ တစ်ပေးခံထားရပြီး သူ့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ခြေစွမ်းက ဒီဆုနဲ့ အထိုက်တန်ဆုံး ကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသလို No. 8 နေရာရဲ့ အနာဂတ်သစ်ကို သူက ယူဆောင်ပေးဖွယ်ရှိနေတယ်လို့လည်း အကဲဖြတ်ခံထားရသူပါ။
18 Jun နံနကျခငျး နောကျဆုံးရ လီဗာပူးလျအပွောငျးအရှနှေ့ငျ့ သတငျးမြား စုစညျးမှု